Halyeyga Liverpool ee Kenny Dalglish oo dhaleeceeyay soo jeedinta lagu joojinayo Premier League – Gool FM
(Liverpool) 15 Mar 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Kenny Dalglish ayaa dhaleeceeyay soo jeedinta lagu joojinayo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Kenny Dalglish ayaa wuxuu carrabka ku adkeeyay inay waajib tahay in la dhameystiro inta ka dhiman kulamada horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Maamulka Premier League ayaa wuxuu si ku meel gaar ah u joojiyay kulamada horyaalka ilaa iyo bisha April, sababa la xiriira caabuqa Coronavirus, gaar ahaan kaddib markii la shaaciyay inuu haleelay macalinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta iyo weeraryahanka Chelsea ee Callum Hudson-Odoi.
Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Liverpool ee Kenny Dalglish wuxuuna yiri:
“Hadda oo aan ahay nin kubadda cagta ah, gacmaheyga kuma jiraan xaqiiqiiyin caafimaad, iyo inaan qiyaaso waxa dhici kara saddexda isbuuc ee soo aadan, fikirkeyga ugu horeeya ayaa ah inaan waqti siino dhameystirka xilli ciyaareedka”.
“Hadii taasi ay ka dhignaato inaan ciyaarno labadii maalmoodba mar mudo seddex isbuuc aah inta lagu jiro bisha Meey ama ilaa Juun, ha noqoto sidaas, balse way ka fog tahay inay ahaato mid wanaagsan, laakiin koox kastaaba isku mid bay noqon doontaa, waxa aan loo baahneyn inay dhacaan ayaa ah in la joojiyo xilli ciyaareedka 2019/2020”.
Intaas kaddib halyeeyga kooxda Liverpool ee Kenny Dalglish ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Reds aysan ku guuleysan doonin koobka horyaalka Premier League wuxuuna yiri:
“Tani cadaalad ma noqon doonto, qof kasta oo qalbigiisa kubadda cagta ay ku jirto, wuxuu qirayaa in tani ay gabi ahaanba tahay wax ka baxsan caqliga” ayuu yiri Kenny Dalglish.
Arsenal oo dooneysa in saxiixa xiddig ka ciyaara Premier League ay ku garaacdo Man Utd iyo Chelsea